Uma konke onakho kuyinto isando, Isis Ungathi nail - Izindaba Rule
Uma konke onakho kuyinto isando, Isis Ungathi nail
Lesi sihloko osesikhundleni “Uma konke onakho kuyinto isando, Isis Ungathi nail” lalotshwa HAL 90210, ngoba theguardian.com ngoLwesihlanu 20th November 2015 12.35 UTC
Uma konke onakho kuyinto isando, konke iqala ngendlela yokuba zibukeke njengohulumeni nail. Ngakho mhlawumbe yayo akumangalisi ukuthi lapho wonke umuntu kanye nenja yabo pops ngaphezu uthango umbono killer kanjani ukubhekana nazo Isis, Badla bonke kubonakala sengathi basikisela ukwenza okufanayo abakwenzayo njalo.
Ngokwesibonelo, uma ungumuntu ummeli copyright, ke ngokucacile impendulo ihilela kusetshenziswe umthetho we-copyright. Ngenxa Isis angase ajabule ekuhlatshweni izinkulungwane, kodwa bayazi ukuthi ekhaya-taping kuyinto ebulala umculo.
Paul Rosenwig, umsunguli ezweni ngokulondeka Consulting inkampani Red Branch, has a plan ngobuqili. "Ini, uma kukhona, kungenziwa siphoqa abahlinzeki ukuthatha phansi akhawunti uma they abazimisele ukwenza kanjalo bonke abaqhutshwa yinhliziyo evumayo? Impendulo, emqodweni wami, siwukuthatha isifaniso kuya Digital Millennium Copyright Act (DMCA)."
Uyazi, DMCA, umthetho American okuyinto, ake bathembeke, akuzange kuphumelele ngokuphelele ekususeni ngokuphelele okuqukethwe emthethweni abavela internet ngakhoke kungenzeka kungabi ucezu model komThetho lokuzula amanzi olukhohlisayo zokwengamela sikahulumeni internet.
Umqondo Rosenwig sika zikanokusho, ngendlela. Uma ungeke uthole umuntu ukuba athathe Isis propaganda phansi bonke abaqhutshwa yinhliziyo evumayo, ke kube njalo ukuthi Oqhubeka usokhaya ukuthi kuyicala. Kodwa hhayi nje noma iliphi icala eliphathelene - umthetho komthetho welungelo lobunikazi, siwuhlobo esibi kunazo zonke ubugebengu kwi internet, kungenzeka.
isiphakamiso sakhe sasiyogcwaliseka ngezinga ukuvumela uhulumeni wagunyaza ukuba third-party yesimangalo se-copyright kunoma iyiphi okuqukethwe yenhlangano amaphekula, bese nomlilo off siqu izaziso zabo ukwehliswa.
Ngokuqinisekile ... impela umvuzo ukhona ikhambi silula kunaleso ukuthi?
Singabantu ibutho. Singabantu eziningi. Thina angisoze ngalilahla ithemba
Ngokuqinisekile ongaziwa uthemba ngakho. It ngamukela ujabule hammer / nail beqisa: lapho hammer une "Amandla ka arsing nxazonke internet", ke ngethemba ungakwazi ukunqoba amathonya lobuphekula bomhlaba wonke by arsing bezungeza ngendlela ngempela okubhekiswe ngempela.
Ngemuva begcizelela "impi" zalo ne Isis ezinsukwini kulandela Paris ukuhlaselwa, ngokuhlanganyela hacktivist iye kwadingeka abanye impumelelo ukhonkolo ekulweni Isis propaganda online.
Inkulungwane ezingamakhulu ama-akhawunti twitter asusiwe namavidiyo ayizinkulungwane eziyisihlanu YouTube kubikwa ukuthi, futhi kamuva isuswe ngu, isevisi, selokhu waqala lo cyberwar ngoJanuwari. Ngini bemphikisa, Anonymous futhi azithatha ukuze bombarding website amaqembu Isis-abasemaqenjini nokuncishwa asakazwa ukuhlaselwa service, ekwenza ngomzamo kubakhiphe okungaxhunyiwe ku-intanethi.
Akuve debatable kungakanani imizamo enjalo ngempela ukusiza ukunyakaza emikhulu emelene Isis, kodwa inani umzamo Anonymous Ubeka ekufezeni imbangela umxhwele.
Kodwa akubona bonke abantu abathintekayo in Anonymous lunikezelwe ngokugcwele ugibele emhlabeni konya. Abanye abe nesisusa yesibili: the lulz. Yikuphi ongase uchaze ngayo ukuthi lelo qhinga yakamuva ezihlongozwayo. Anonymous kuhlelwe ukucasula Isis ukunqunyelwa ukufa by Rick Rolling nabo.
Isenzo yethu oluzayo: ukugaxela iqinisekisiwe ISIS hashtag nge rickrolls. Ingabe ukudedela uhlu ngokushesha njengoba ihlanganiswa.
Njengoba sazi ithule isikhathi eside wabo bonke abantu pretty okuningi ochitha isikhathi esiningi kuyi-internet - Hal 90210 wawuhlanganisa - plan imayelana njengoba cishe ukubona ophawulekayo njengoba uyinqaba copyright umqondo Red Branch sika. Kodwa uzoba sigcina wena usesikhathini.
31539	0 Anonymous, Isigaba, Blogposts, hacking, HAL 90210, Internet, Islamic State, okokuhluza ogaxekile, Technology, izindaba World
← Ingabe kuwufanele kokuthenga buthule, PC fanless? ubumfihlo Goodbye, sawubona 'Alexa': Amazon Echo, robot ekhaya ngubani ekuzwa konke →